Manchester Utd Oo Indhaha Ku Heysa Inay U Dhaqaaqdo 26 Jirka Xiddiga Ka Ciyaara La Liga
HomeHoryaalka IngiriiskaManchester Utd oo indhaha ku heysa inay u dhaqaaqdo 26 jirka xiddiga ka Ciyaara La Liga
January 2, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay dib u soo cusbooneysiisay xiisihii ay u qabtay inay la soo wareegto Saul Niguez.
26 jirkaan reer Spain ayaa lagu xamanayay inuu u dhaqaaqi doono Old Trafford dhamaan suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay, si kastaba ha ahaatee, iyadoo Saul uu sii joogay Wanda Metropolitano.
Si kastaba ha noqotee, ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain ayaan weli shabaqa soo taaban ama uusan sameynin caawin xilli ciyaareedkii 2020/21 waxaana lagu xadiday 30-daqiiqo isagoo badal kusoo galay kulankii dhawaa ee Derby Madrid.
Iyadoo ay sii kordhayaan wararka xanta ah ee ku saabsan mustaqbalka Paul Pogba, Todofichajes ayaa ku warameysa in Red Devils ay dib u soo cusbooneysiisay xiisihii ay u qabtay Saul, si kastaba ha noqotee, inay heshiis la gaarto Atletico ayaa laga yaabaa inay dhibaato tahay.
Warbixinta ayaa soo jeedineysa in Red Devils ay dooneyso inay heshiiskan ku dhowaato 70 milyan oo ginni (63 milyan oo ginni), si kastaba ha ahaatee, Saul ayaa qandaraaskiisa Atletico lagu burburin karaa € 150m (£ 135.1m), iyadoo kooxda reer Spain ay diidan tahay inay hoos u dhigto heshiiska